Home Wararka AMISOM oo Shacbi Laaysay, Gubtay Meydkooda, Kadibna Bogaadisey waa inay dalka ka...
AMISOM oo Shacbi Laaysay, Gubtay Meydkooda, Kadibna Bogaadisey waa inay dalka ka baxdaa
“AMISOM waxay bogaadineysaa geesinimada iyo howlgalka degdegga ah ee askarteeda oo mid ka mid ah uu ku dhaawacmay”, ayaa ku xusan qoraalka kasoo baxay ciidamada AMISOM, iyadoo Magaalada Muqdisho la keenay meydadka 7-qof oo shacab ah oo si bareer ah ay u dileen ciidamada AMISOM, dadkan ay dileen ayaa isugu jira dad beeraley ah iyo sidoo kale dad kale oo gaari wadada uga xumaaday. Faah-faahinnada la helay ayaa sheegaya in dadkaas badan ee ahaayeen shacabka aan shabaab shaqo ku lahayn kuwaas oo ay ciidamada AMISOM ku dileen deegaanka Golweyn oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, iyagoo markii dadkaas ay dileen oo xabado safmar ah ku fureen, kadib intey is dul tubeen miino ku qarxiyey meydkooda si aan loo garan.
Runtii waa dhacdo xanuun badan oo keeneysa in qof waliba uu ka argagaxo tallaabada foosha xun ee ay AMISOM qaadday, waxayna hiil u noqoneysaa Shabab oo u muuqanaya inay yihiin kuwa ka difacaya AMISOM, maadaama dowladda Xilgaarsiinta ee Rooble iyo Farmajo oo aan dan ka lahayn dal iyo dad aan Marreexaan ahayn ay bogaadinta la qabaan AMISOM.
Kenya waxaa xiriirka loogu gooyey sida uu Farmajo noo sheegay markii ay dad ku dishay Gedo. Dadka reer Shabeelada hoose maxay ku waayey difaaca, qeylodhaanta madaxtooyada iyo Diiq yeerkii Dubbe taas oo ay heleen reer Gadoodka misa waa waxay ku qabiil yihiin Farmajo. Aaway Rooble oo ay kuwaan ka xigaan Farmajo misa wuxuu ku mashquulsan yahay safarroo iyo soo dhoweynta waddamo dano fogfog naga leh balsa isaga ku seexinaya marxabeysiin iyo soo dhoweyn afka baarkiisa ah.
Dhinaca kale Somaliya waa qabiillo aaway hogaamiyayaashii dadkaan dulmiga loo laayey oo Xamar ku xoonsan iyagoo kursi raadis ah, balse aan juuq iyo jaaq midna ka oran xasuuqan dadkooda loo geystay? Yey rabaan inay matalaan haddiiba ay ka aamusayaan xasuuqa dadkii ay ka dhsaheen?
Ma aha markii ugu horreysay ee dad shacb ah laayaan AMISOM, kdibna ay ku sheegaan inay shabaab ahaayeen, weli lama soo sheegin goob ay ay shabaab intaas la’ eh AMISOM ku dhishay ee mar waliba intay shacab disho ayey ku sheegaan Shabaab, Farmajo iyo Fahadna waa farxadooda.
Shabaab cidda markey iska hor yimaadaan baacsataa waa geesiyaashaa XDS oo aan xataa haysan qori aan wax badan lagu dagaallami karo, raggii yaqaannay hogaamin ciidan, aqoon dagaal iyo hawlgelin ciidan waxaa lagu badalay rag cimaamadley oo magacyo kala duwan loo bixiyey suuragalna ay tahay inay ku biiraan shabaabka dhammaantood.
Ciidamada AMISOM ee dalka joogaa waxaa lagu sheegaa inay dhan yihiin 22,000 ilaa , waaxaana ku baxay kharash dhan $36 Bilyan iyo haddana lama hayo guul weyn oo ay soo hooyeen oo ay shacbiga u dabbaal dagaan kuna amaanaan marka laga reebo madaxda oo ay xumaan iyo samaanba ku waardiyeeyaan xaruumahooda, taas oo xataa ah inay shacbiga ka hor joogaan inay Villada ka soo jiitaan Farmajo oo kale oo ciil iyo xanuun badan baday reer kasta oo Somaliyeed si toos ah ama si dadbanba.
Muddo dheer ayey AMISOM sameyneysay tacdiyo aan cidi u raacan waxayna ku gabbaneysay erayga beenta ah ay dowladaha wax matarayaasha ah isticmaalaan taas oo ah “ Waa la baarayaa” weligeedna waxba kama soo baxaan.
Tusaale November 2018 : AMISOM waxay ku dileen afar qof oo shacab ah degaanka Suuqa Xoolaha la iskama warsan welin war looma hayo, waxaana ku maqan oo aan xafiisyada ku soo noqon weli ciddii barista loo diray-tolow ma shabaab ayey ku biireen?.
Shacbiga Somaliyeed waxaa uu soo garay xeliggii AMISOM dalka laga saari lahaa oo laga xoreyn lahaa Shabaabna la isaga qaban lahaa haddii kale waxaa dhaceysa waxa haatan ka dhacay Afganistaan, waayo shisheeye cadow kaama ilaalinayo. Muddo dheer oo ay Malaayiin lacag ah ku bixiyeen caawa 20 sano ka dib Kabul waxaa haysta Talibaan. Somaliduna haddii aysan iyadu tashan waxaa qabsanaya Shabaab, taas oo ka bilaaban doonta marka ugu horreysa ee Itoobiyaanka Ka baxaan Baydhabo oo la filayo inay dhacdo maalmo dhow waayo dalkoodii ay kala socda oo ay dagaallo ahli ah ka bilaaban rabaan.
Shabaab waxay iman doonaan Afgooye, AMISOMna waa iska carari doontaa waxaana loo kala tagi doonaa waa shabaab iyo Dadka Somaliyeed. Haramcad, Gorgor iyo Duufaanna iyaga ayey ku biiri doonaan waayo ma jirto meel ay CXD kaga jiraan oo waa gacan ku rimis ay Faramajo iyo Fahad ay Qatar u abuurtay,lagana soo ururiyey Gedo iyo reero wada ciilqaba. Dhinaca Qatar waxay sameyn doontaa sida hadda ay ku sameysay dowladda Afganistaan oo ay wadahadallo been ah lua furtay Taalibaan kadibna ku seexisay. Annaga waaba iska fududahay oo looma baahna in nala seexiyo Farmajo iyo Fahad horaba waxaa uga dhaxeyay Shabaab wada shaqeyn aan cidi kaqarsaneyn oo suuqyada iyo dekadda ayaa canshuurta ka soo baxdaa la qeybsadaa.
Isku soo duub AMISOM waa inay si degdeg ah uga baxdaa dalka waana in dalka laga saaraa iyadoon aan loo eegin dalka ay ka yimideen, waayo waa araxn darro inay hooyo Soomaliyeed oo ay Gardarro ku dileen ay haddana meydkeeda inata miino ku xeraan ay qarxiyaan si ay u arkaan sida ay hilabaheeda u kala googo’ayaan, waxaana ka arki doontaan muqaalkaan hoose haddii ay kula tahay inaan ka beensheegeyno AMISOM.
Gardarro ayeyba ku dileene waxay u gubeen waa ina laga gooyaa AMISOM.
W/Q. Maxamed Xuseen Sheekh